Madaafiic lagu weeraray Saldhig ay ku sugan yihiin ciidamada Puntland | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Madaafiic lagu weeraray Saldhig ay ku sugan yihiin ciidamada Puntland
Boosaaso (Halqaran.com) – Xubno katirsan Ururka Al-Shabaab ayaa subixii hore ee Axadda maanta waxaa ay weerar madaafiic ah ku qaadeen Saldhiga Ciidamada Puntland ku leeyihiin deegaanka Af-urur oo hoostaga Magaalada Boosaaso ee Xarunta Gobolka Bari.
Dad goobjoogayaal ah ayaa waxaa ay sheegeen inay maqlayeen dhawaqa madaafiic dhowr ah oo ku dhacay Saldhiga iyo agagaarkiisa, sidoo kalena Ciidamada Puntland ay dhankooda tiro madaafiic ah ku jawaabeen.
Ilaa iyo hadda lama cadeyn karo khasaaraha ka dhashay madaafiic, hayeeshee Al-Shabaab oo sheegtay weerarka ayaa waxaa ay sheegeen in Ciidamada Puntland ay saldhiga Af-urur ay isaga baxeen.
Sidoo kale, wararka ayaa intaasi ku daraya, in dagaal kooban uu duleedka degaanka Af-urur ku dhexmaray Ciidamo ka tirsan Puntland oo ku wajahnaa degaanka Af-urur, waxaana ka dhashay khasaaro kala duwan.
Al-Shabaab ayaa dhowr jeer waxaa ay weerar madaafiic ah iyo mid toos ah ku qaadeen Saldhiga Ciidamada Puntland ee Af-urur, waxaana sidoo kale Ciidamada Puntland dhankooda ay sameeyaan howlgallo ka dhan ah Al-Shabaab.